Wararkii u dambeeyay dagaalo culus oo ka dhacay Jubada hoose
Wararka ka imaanaya deegaanada Miido iyo Harboole ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal uu halkaasi ku dhexmaray ciidamada Isgarabsanaya ee dowladda, Raaskambooni iyo Kenya iyo sidoo kale Al Shabaab oo dhinac ah.
Dagaalka oo yimid markii Dagaalyahaano ka mid ah Shabaab ay wadada u galeen ciidamada oo kusii jeeday deegaano kale oo ku dhow Kismaayo ayaa waxa uu sababay dhimashada 10 ruux iyo dhaawac in ka badan oo ah dhinacyadii dagaalamay.
Maxed Yuusuf oo ka mid ah Masuuliyiinta Ururka Raaskambooni ayaa waxa uu sheegay in dagaalkaasi ay Al Shabaab kaga dileen 8 ruux in ka badana ay kaga dhaawaceen, isaga oo dhankooda sheegay inuu ka dhintay hal ruux labo kalana ay ka dhaawacmeen sidoo kale Al Shabaab waxa uu sheegay inay hub ka qabsadeen.
War kasoo baxay AL Shabaab ayaa iyana waxa ay ku sheegeen in dagaalkii shalay galab ka dhacay Miido iyo Harboole ay qasaaro xoog leh ku gaarsiiyeen ciidamada Huwanta ah inkastoo aysan carabaabin qasaarahaasi inta uu dhan yahay.
Saaka ayaa xaaladu waxa ay tahay mid ka dagan sidii hore inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inay jiraan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo u dhaxeeya dhinacyada dagaalamaya.